Wargeyska Africanreport “Soomaaliya Ma Ahan Soomaaliyadii Hore” | Xaqiiqonews
Wargeyska Africanreport “Soomaaliya Ma Ahan Soomaaliyadii Hore”
Warbixin lagu daabacay wargeyska the Africanreport ayaa lagu yiri ” 8-dii Febraayo Soomaaliya sida la filanaayey waxa aheyd in ay fowdo dhacda hase ahaatee taasi ma dhicin.
Wargeyska ayaa ki bilaabay, waxa la filaayey maalintaas (Waa 8-deeda Feberaayee) dagaalka wadooyinka, codadka rasaasta, iyo xitaa askar ka goosato DF-ka, laakin maalintaas intuba ma dhicin.
Dhammaan cabsida la sadaalinaayey waxa ay aheyd un mid lagu saleeyey tijaabooyinkii horay uga dhacay Soomaaliya, “laakiin Soomaaliyada cusub waa ay ka duwan tahay” ayuu Wargeyska raaciyey.
Sidoo kale Aqri: Soomaaliya Oo Dhinacan Kaga Horumartay Afrikada Kale
Soomaaliya Wili Waa Ay Qasantahay, laakiin Waa Ay Ka Duwantahay
Muranka doorashooyinka Soomaaliya oo iyaga aysan ka dhalan wax gacan qaad ah – sida wargeyska lagu qoray- ayuu wargeyska ku sifeeyey mid la mid ah shaqaaqooyinka doorashooyinka hareeya ee ka dhaca wadamada dimuqoraadiga ah.
Sida uu qoraayo dastuurka Soomaaliya, muddo xileedka barlamaanka iyo Madaxweynaha ayaa isbadalaysa afar-tii sanaba mar, sidaasi oo ay tahay barlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey sharci ogolaanaya muddo kororsi waqtiyeesan oo ay helayaan barlamaanka iyo madaxweynaha intii laga helaayo cid iyaga badasha.